I-PunchTab: Imivuzo yoLuntu kunye nokunyaniseka kuyo nayiphi na indawo | Martech Zone
NgoLwesihlanu, Septemba 2, 2011 NgoLwesithathu, Oktobha 26, 2011 Douglas Karr
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo bendivavanya iqonga elitsha elibizwa PunchTab. Ukusuka kwindawo yePunchTab:
I-PunchTab liqonga lokuthembeka lokuqala lehlabathi elivumela abanini bewebhusayithi (kubandakanya iibhlog), abaphuhlisi bezicelo kunye neempawu ukwenza inkqubo yokunyaniseka enikwe amandla kwezentlalo kunye neselfowuni simahla kwimizuzu. Sineemveliso ezimbini ezithandwayo namhlanje, zombini ezingabizi mali ukuzisebenzisa:
Inkqubo eqhubekayo yokunyaniseka onokuyisebenzisa ukukhuthaza abasebenzisi bakho ukuba batyelele yonke imihla, babelane ngomxholo wakho kwiinethiwekhi zentlalo kwaye ushiye izimvo (sikwanazo nekhithi yophuhliso ekuvumela ukuba ungeze iindlela zesiko lokufumana amanqaku). Abasebenzisi baya kufumana amanqaku mihla le ngezenzo zabo kwaye banokuhlawulela imbuyekezo kwikhathalogu yokunyaniseka enakho xa befumana amanqaku aneleyo.
Iwijethi yokunikezela yexesha elinye ekhuthaza abasebenzisi bakho ukuba basasaze igama malunga nendawo yakho endaweni yokutshintshela ukungena kumrhumo wewonga.
Into engakholelekiyo ngeqonga kukuba zombini kulula ukuzisebenzisa kunye nokuzenzela inkonzo. I-Punchtab ivumela umthengisi ukuba acwangcise ngokulula inkqubo yomvuzo nakuphi na ukuhlangana nophawu ... ukusuka kwi-Retweets, ukuya kwi-Facebook Likes, kwi-imeyile ye-imeyile. PunchTab Uxhase ngaphezulu kwe-1,000 yokunikezela kwiinyanga ezi-3 zokugqibela- kubandakanya enye nguTim Ferris, MahaloGaming kunye neCrunchGear. Inkulu yabo yayinguVyrso.com, owamkela ngaphezu kwama-100,000 kunye ne-9,500 abalandeli be-Facebook kwiintsuku ezingama-30!
Abathengisi bewebhu beSavvy kunye nabanini bamashishini bayazi ukuba uninzi lweengeniso ezizayo ziya kuqhutywa kukuphindaphinda ukubandakanyeka, ukuthengiselana, kunye neengcebiso ngabathengi osele uwaphumelele. I-PunchTab ibonelela ngeqonga elinye elibabandakanya ngokupheleleyo aba bathengi kuzo zonke iindawo zokuchukumisa: kwi-Intanethi, kwezentlalo, ngaphandle kweintanethi, kwiselfowuni nakwi-e-commerce. CEO kunye noMsunguli Ranjith Kumaran
Kukho iisayithi ezingaphezu kwe-1600 eziqhuba iinkqubo zokunyaniseka zisebenzisa iPunchTab
Ezi ndawo zinika iPunchTab ukufikelela kubathengi be-6MM (oko kuthetha ukuba abantu abangama-6MM abahlukileyo babone iinkqubo zokunyaniseka ezixhaswe yiPunchTab)
Iindawo ezinkulu kwinethiwekhi yePunchTab jonga ukuphindaphinda kokuzibandakanya kokuphakanyiswa I-50% -100% isuka “kumalungu”Ngaphezulu komsebenzisi ophakathi. Oku, ewe, kubandakanya ukuzikhethela njengabasebenzisi abasebenzayo ngakumbi banokuba ngamalungu. Inxalenye ebalulekileyo kukuba ngoku iisayithi zichonge kwaye zinike ezi zixhobo zokuphembelela ukuzisa abantu abaninzi kwitheko ngePunchTab.
Iindawo nazo ziyabona phakathi I-15% ukuya kwi-35% yokuphakamisa kwimisebenzi yentlalo (iiposti zodonga, ukwabelana, ukuthumela i-tweeting)
Mar 24, 2012 ngo 1:07 PM
Ijongeka inomdla, kuba iya kuba ngumlutha kakhulu ekwenzeni umsebenzi othile (itwitter, ukuthandwa okanye ukubeka +1) ukufumana umvuzo.
Epreli 6, 2012 ngo-1: 38 PM
Ndiyifakile kwiwebhusayithi yam, kwaye ndayifaka kwi-toolbar ye-wibiya. Ngenxa yezizathu ezithile, i-facebook ye-facebook kunye namaqhosha e-google okwangoku ayiniki mivuzo, kwaye abafundi bam bafumana amanqaku ngokundwendwela kunye nokubeka izimvo. Ndixele ingxaki kwiPunchTab kwaye bathi bazakuyijonga.
Ngapha koko, le plug-in engummangaliso enokuthi inike inkuthazo ebantwini ukuba babhengeze amanqaku, kwaye bafumane umvuzo. Kwaye kwiibhlog / kwiiwebhusayithi, le yeyona nto intle!
Iwijethi ayibonisanga kwiphepha lam le-facebook